ယေရှုသည် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့သည် | Jesus Wounded, Bruised and Beaten | Real Conversion
ယေရှုသည် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့သည်
(ဟေရှယ ၅၃ထဲက ၆ခုမြောက် ဒေသနာတော်)
၂၀၁၂၊ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
စနေနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ထိုသူသည် ငါတို့ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့ ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျှက်ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
ရောမဩဝါဒစာ၊ ပထမစောင်၌ ခြားနားမှုနှစ်ခုဖြစ်သော တစုံတရာကို သိခြင်းနှင့် ရရှိခံစားခြင်းကို ဖော်ပြရန် ဂရိဘာသာစကားနှစ်ရပ်ကို သုံးနှုန်းထားပါသည်။ ရောမ ၁း၂၁တွင် ရှေ့ခေတ်လူတို့သည် “ထာ၀ရဘုရားကို သိခဲ့ကြ၏” ဟူ၍ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ သိခြင်းကို ဂရိဘာသာ စကားဖြင့် "gnosis" ဟူ၍ သုံးနှုန်းထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသူတို့သည် ထာ၀ရဘုရား အကြောင်းကို သိခဲ့ကြသည်၊ ဆိုလိုပါသည်။ ရောမ ၁း၂၈တွင်၊ ထိုသူတို့သည် ထာ၀ရဘုရားကို “မသိမမှတ်လို” ဟုဆိုပါသည်။ “အသိဗဟုသုတ” ကို ဂရိဘာသာ စကားအားဖြင့် "epignosis" ဟုသုံးထားပါသည်။ ၎င်းသည် (အမှန်သိခြင်း) gnosis ဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတ အသိရှိခြင်း အမှန်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ (see W. E.V ine, An Expository Dictionary of New Testament words, Revell, 1966, volume II, p. 301). ရှေ့လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သိကြသော်လည်း (gnosis) ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ရင်းနှီးသိကျွမ်းခြင်းမရှိကြပေ။ (epignosis). ဘုရားသခင်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမသိ ကျွမ်းခဲ့ကြပါ။
သခင့်ညစာအကြောင်းကို လေ့လာသောအခါတွင်၊ ရောမအခန်းကြီးတစ်ကို စဉ်းစားဖို့လိုသည်၊ မုန့်ကိုစားသည်ဖြစ်စေ၊ ခွက်ကိုသောက်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းမရှိသောကြောင်း၊ မစားမသောက်ရပါ။ သင်သည် အပြင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့်၊ စိတ်နှလုံးအားဖြင့်၎င်း သခင့်ညစာကို သိခြင်းဖြစ်မည်၊ တကယ်တော့ သခင့်ညစာသည် ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကို ဖော်ပြနေပါသည်။ သင်အမှန်တကယ်သိကျွန်းခြင်း ရှိရမည်။ (gnosis - သိခြင်းရှိသော်လည်း) (epignosis - ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရင်းနှီးသိကျွမ်းခြင်း ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကို သင်မသိခြင်းဖြစ်သည်။)
ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်သည် ထိုသို့ဆိုလိုပါသည်။ အပြင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့် နုတ်ကပတ် တော်ကို သိနိုင်သည်။ သို့သော် အတွင်းအတိမ်အနက်သဘောကို မသိဖြစ်နေနိုင်သည်။ အမှန်တကယ် “အပြန်အလှန်သဘောပေါက်နားလည်ခြင်း” ရှိရမည်။ (ibid) ထို့ကြောင့် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ ဖော်ပြထား သောအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သေသေချာချာသိစေလိုပါသည်၊ အတွင်းနှလုံးသားအားဖြင့် ယေရှုခရစ် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အမှန်တကယ်သိကျွမ်းခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟု မျော်လင့်ပါသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့၏လွန်ကျူးခြင်း၊ အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်းကို ခံရလေ ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့ပေါ်သို့ ကျရောက်၍ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျှက် ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
သင်သည် အသက်တာအသစ်၌ ပြောင်းလဲလိုသောသူဖြစ်လျှင်၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က သင့်အား လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဦးနှောက်အသိဖြင့် ယေရှုခရစ်ကိုသိမြင်မှ စိတ်နှလုံးသားအမှန်ဖြင့် ခရစ်တော်ယေရှုကို အားကိုးတတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်ကြွေးကို လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ပေးချေပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်နှင့် ပါတ်သတ်၍ အချက် ၃ချက်ဖြင့် ဖော်ပြ ပါမည်။
၁။ မထမ၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်း အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
ဦးစွာပထမ စကားဆက် သို့သော်သည်၊ အပိုဒ်ငယ်လေး၏ အဆုံးပိုင်း၌ ဖော်ပြမှားယွန်း သော အတွေးအမြင်နှစ်ခုကြားကို ဖော်ပြရသည်။ ၎င်အချက်သည် ခရစ်တော်သည် မိမိ၏အပြစ အတွက် အသေခံခြင်းဖြစ်၏ ဟူသောအချက်နှင့် အမှန်စင်စစ တွင် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို Y၏ အပြစ်များ အတွက် အသေခံခြင်းဖြစ်သည် ဟူသော နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ အီးဝပ်တ် ဂျေယန်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်၏သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာတီမောသေလင်း၏ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာယန်းပြောကြားသည်မှာ၊ “အထူးသဖြင့် နာမ်စား ထိုသူ သည် ဟူ၍ ဦးစွာ တွေ့ရပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြရာတွင် ထိုသူသည် အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက် ခြင်းကို ခံရသည် ဟူ၍ တွေ့ရပါသည်။ (Edward J. Young, Ph.D, The Book of Isaiah, William B Eerdmans Publishing Company, 1972,volume 3, p. 347).
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်း အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“နာကျင်စွာထိုးခြင်း” ဟူသော စကားလုံးသည် အရေးပါလှသည်။ ဒေါက်တာ ယန်းပြောကြားသည်မှာ၊ ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ “သံချွန်နှင့်ထိုးခြင်း” ဟူ၏။ “သေသည့်တိုင်အောင် သံချွန်ဖြင့် ထိုးသတ်ခြင်းဟု ဆို၏” (Young, ibid.). ဟေဗြဲဘာသာစကားအရ “သံချွန်ဖြင့်ထိုးဖောက် သည်။” “ပေါက်အောင်ထိုးဖေါက်သည်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည် (ibid.). ထိုကဲ့သို့ ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၂း၁၀၌လည်း ဆိုထားပါသည်။
“သူတို့သည် မိမိတို့ထိုးဖေါက်သော ငါ့ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်” (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)။
ဤသူကား ခရစတော်ခံရမည့် ဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်း ကြိုတင်ဟောကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူး ရစ်သရဖူ ဆောင်းစေကြ၍ အသွေးယိုစီးလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်၏ ခြေလက်တို့ကို သံမှိုဖြင့်စွဲထားကြ လိမ့်မည်။ ရောမစစ်သားတို့က လျှံချွန်ဖြင့် ကိုယ်တော်အားထိုးဖောက်ကြလိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်ဟော ထားခြင်းဖြစ်သည်။
“စစ်သူရဲတစ်ယောက်သည် နံဘေးတော်ကို လျှံနှင့်ထိုးဖောက်၍ သွေးနှင့်ရေသည် ချက်ချင်း ထွက်လာ၏။ သူတို့သည် မိမိတို့ထိုးဖောက်သော ငါ့ကို ရှုမြင်ကြလိမ့်မည် ဟူသောကျမ်း ချက်ပြည့်စုံဖို့ရန် ဖြစ်သည်” (ယောဟန် ၁၉း၃၄၊ ၃၆၊ ၃၇)။
ထို့နောက်ကျမ်းမြတ်တော်၌ လာသည်ကား၊ “ထိုသူသည် ငါတို့၏လွန်ကျူးခြင်းကြောင့် နာကျင်စွာ ထိုးနှက်ခြင်း၊ နှိက်စက်ခြင်းခံရလေ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။ ဟေဗြဲဘာသာစကားဖြင့် သည် ထုခြေသည်ကြေသည် ဟုဆိုလိုသည်။ (Young, ibid.). ခရစ်တော်သည် ထုခြေ၊ ကြေမွခြင်းဝေဒနာကို ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်၌ ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကားတိုင်ထက် အသေမခံမှီည၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသည်။
“ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံလျှက် အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆိုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက် တော်သည်ကား၊ မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်တသည်း” (လုကာ ၂၂း၄၄)။
ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌၊ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ခံစားသွားခဲ့သည်။
မကြာမီ ခရစ်တော်သည် ထိုးခြင်း၊ နှိက်စက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ကားတိုင်ထက် သံမှိုစွဲခြင်း၊ နံဘေးတော်ထိုးဖောက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရ၏။ ထိုသို့ပြင်းထန်သော ဝေဒနာခံစားရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ဒဏ် ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ ကျရောက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေတရု မိန့်ကြား သည်မှာ၊
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာ ခံတော်မူပြီ” (၁ပေ ၂း၂၄)။
“ထိုသူသည် ငါတို့ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်းနှိက်စပ်ခြင်းကို ခံရလေ၏” (ဟေရှယ ၅၃း၅)။
ဒေါက်တာဣဇာက်ဝပ်တ်က၊ ၎င်းကျမ်းနှင့်စပ်လျှန်း၍ ဓမ္မသီချင်းကို ရေးသားသီကုံးခဲ့ပါသည်။
ဖော်ပြမရ၊ တုနှိုင်းမမှီ သနားခြင်းဂရုဏာ!
(၁၆၇၄-၁၇၄၈၊ ဣဇာက်ဝပ်တ် သီကုံးသော အို! ကယ်တင်ရှင်
၂။ ဒုတိယ၊ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌ အစားဝင်ဝေဒနာခံခဲ့သည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့ကျူးလွန်ခြင်း အပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ် သို့ရောက်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
၎ င်းကျမ်းပိုဒ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို မသိဘဲ အကြိမ်များစွာ ဖတ်ကြားခဲ့ဖူးသည်။ ဒေါက်တာ ဒေလီဇယက်စ်က အနက်ပြန်ဆိုသည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဖို့ ရိုက်နှက်ဆုံး မခြင်းဖြစ်သည်” ဟုဆို၏။ (C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the old Testament, Eerdmans Publishing Company, 1973 reprint, Volume VII, p. 319). ဤသို့ ဝေဒနာခံစားရခြင်းကား “ကျွန်ုပ်တို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဖို့ဖြစ်၏၊ ကောင်းကင်ချမ်းသာ ခြင်း၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်၏” (ibid.). ဟူသောစကားလုံးသည် “ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း” မည်၏။ ဒေါက်တာယန်းပြောကြားသည်မှာ၊ “ထိုပြစ်ဒဏ်အားလုံး ခရစ်တော် အပေါ် ကျရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုပါလျှင်၊ ဘုရားသခင် စိတ်ကြေချမ်းအောင် လုပ် ဆောင်သည် ဟူသောစာကြောင်းလိုနေပေမည်ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ (Young, ibid., p. 349). ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားစီရင်ချက် ခရစ်တော်အပေါ် ကျရောက်ခြင်းဟူသည် အပြစ်ကို မုန်းတီးသောဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်ကို ပြေစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် ကျမ်းစာအနက်ပြန်သူတို့အနက် မပြန်ရဲကျသော အချက်အလတ်များကို ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီလ် မှန်ကန်စွာ အနက်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆရာကြီးပြန်ဆိုထားသည်မှာ၊
“ကျွန်ုပ်တို့ ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဖို့ ကိုယ်တော်အပေါ်အပြစ်စီရင်ခြင်းဟူသည်၊ မဖြစ်မနေစီရင်ရမည့် ပြစ်ဒဏ်အားလုံး ကိုယ်တော်အပေါ်ကျရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်အားဖြင့်လည်း တင်းမာလျှက်ရှိသော ဘုရားသခင်နှင့်လူစက်ကြား ပြန်လည်၍ သင့်မြတ်လာဖို့ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အမျက်တော်သည် ဖြေပျောက်ပြီး၊ ဖြောင့်မတ်သောသူနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရှိသော သူများဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ (John Gill. D.D, An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, vol. I, p.312).
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသမှ “ရွှေးနုတ်ခြင်း” အကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
“သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း၊ ဖြစ် စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်ထင်ရှားစွာ ပြတော်မူပြီ” (ရောမ ၃း၂၄-၂၅)။
တမန်တော်ကြီး၏ အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်း၊ အကြောင်းနှင့်စပ်လျှန်း၍ မစ္စတာအလ်ဘတ်မစ်လင် ရှင်း လင်းချက် ဓမ္မသီချင်းကို မစ္စတာဂရိုဖက်စ်သီဆိုပေးခဲ့သည်။
- ဖော်ပြမကုန်သော အမျက်တော်ကိုယ်တော်ထမ်းရွှက်
(၁၈၂၅-၁၉၀၉ အလ်ဘတ်မစ်လင်း သီကုံးသော “အမျက်တော်ခွက်ဖလား”)။
ခရစ်တော်သည် သင့်နေရာ၌ အစားဝင်၍ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ပြီ၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမှ သင့်လွတ်ခြင်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
“ငါတို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ ရောက်၍” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)
၃။ တတိယ၊ ခရစ်တော်ခံရသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနာပျောက်လျှက် ရှိပြီဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြားကြပြီး၊ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်ဖြစ်သော “ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍” ဟူ သောအချက်ကို ဂရုစိုက်ဖတ်ကြစို့!
“ထိုသူသည် ငါတို့၏လွန်ကျူးခြင်း၊ အပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးနှက်ခြင်းကို ခံရလေ ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့ပေါ်သို့ ကျရောက်၍ သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျှက် ရှိ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
“သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့အနာပျောက်လျှက်ရှိ၏” သည် ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် “ဒဏ်ချက်”ကို အထူးသဖြင့်ဖော်ပြသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုက ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ၁ပေ ၂း၂၄ ၌ကိုးကားရည်ညွန်းထားပါသည်။ ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ကို “ဒဏ်ချက်တော်များ” ဟူ၍အနက်ပြန်ထားပါသည်။ ယေရှုအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း အကြောင်း၊ ဟေရှာယ ၅၃း၅ နှင့် ၁ပေ ၂း၂၄ တို့၌ ဖော်ပြချက်ဖြစ်သော “သူခံရသော ဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အနာပျောက်လျှက်ရှသည်” ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ခရစ်တော် သည် ပိလတ်မင်း၏ အမိန့်တော်အရ၊ ရောမစစ်သားတို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ သမ္မကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊
“ထိုအခါ ပိလတ်မင်းသည် ယေရှုကိုယူ၍ ရိုက်ပြီးမှ” (ယောဟန် ၁၉း၁)။
“ပိလတ်မင်းသည်လည်း လူများတို့အား ဗာရဗ္ဗကိုလွတ်လေ၏။ ယေရှုကိုကား၊ ရိုက်ပြီးလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သတ်စေခြင်းငှါ၊ အပ်လိုက်လေ၏” (မဿဲ ၂၇း၂၆)။
ဒဗလျှူ၊ အီးဝိုင်ပြောကြားရာတွင်၊ ဂရိဘာသာစကား အရ၊ ပိလတ်မင်း၏အမိန့် အာဏာအတိုင်း၊ ယေရှုခရစ်အား ရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ ရောမစစ်ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိသူကို အဝတ်ချွတ်ခိုင်းပြီး၊ ကျောက်တိုင်၌ ချည်ထားလျှက်၊ ရိုက်နှက်ရသည်။ ရိုက်မည့်ကြာပွတ်ကို သား ရေဖြင့် လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရှသောအချွန်အထစ်ကလေးများရှိသည်။ ယူဆယ်ဘီးစ် ရာဇဝင်၌၊ ထိုသို့ရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့် အသက်သေဆုံးသွားသော မာတုရများစွာရှိသည် ဆို၏။ (W. E. Vine. An Expository Dictionary of New Testament Words, Fleming H. Revell Company, 1996, reprint, volume III, pp. 327-328). ဟူသော စကားလုံးသည် ယေရှုခံစားရမည် ပရောဖက်ပြုချက်အတွက်သာ သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြ လာသည်မှာ၊
“ငါတို့သည် ယေရှုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ လူသားသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး ကျမးပြုဆရာတို့လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ သူတို့သည် သေပြစ်ကိုစီရင်ကြလိမ့်မည်။ လူသားအားဖြင့် ပျက်ရယ်ပြုခြင်း၊ ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားခြင်းကို ပြုစေခြင်းငှါ တပါးအမျိုးသားတို့သည် အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ပြန်ရှင်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မဿဲ ၂ဝး၁၈-၁၉)။
စပါဂျန်က၊ ခရစတော်ထိုးခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်စပ်လျှန်း၍ အောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပေးဖော် ပြခဲ့ပါသည်၊
ယေရှုအား ကြိုးနှင့်တုတ်နှောင်ပြီး၊ ရောမစစ်သားတို့ရက်စက်စွာ ထိုးနှက်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ကြည့်ပါ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြင့် ရိုက်နှက်ကြသည်ကို နားစွင့်လိုက်ပါ။ ဒဏ်ရာတော်ထဲက သွေးစီးကျလာသည်မက၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ရုပ်ဆင်းပျက်သွားသည် ကို တွေ့မြင်ပါလိမ့်မည် ကိုယ်တော်စိတ်နှလုံး ကွဲလုမတတ်ရိုက်နှက်ကြသည်ကို တွေးကြည့် ပါ၊ အတွင်းနှလုံသား ဒဏ်ရာရသည့်အထိ၊ ဝေဒနာခံစားသွားသည်ကို သေချာစဉ်းစား ကြည့်ပါ။ မခံမရပ်နိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ပေးဆပ်သွားသည်ကို သတိရလိုက်ပါ။ နှိုင်းယှဉ်၍ မရနိုင်သောယေရှု၏ ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို သင်လည်းနားလည် ခံစားနိုင်ပါ စေဟု ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ခရစ်တော်ယေရှုကို နားလည်ပေးသည့်သာမက ကိုယ်တော့် ကို ချစ်ခင်လာအောင် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။ (C.H. Spurgeon, “Christopathy,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim publications, 1976 reprint, volume XLIII, p. 13).
စပါဂျန်က ဆက်ပြီးပြောကြားသည်မှာ၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ နာကျင်စွာ ထိုးခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံသည့်တိုင်အောင် ပေးဆပ်သွားခဲ့ပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်း၊ နာကျင်စွာ ထိုးခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းသည် မိတ်ဆွေနှင့်ကျွန်ုပ် အတွက်ဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ကိုယ်တော်၏ ဝမ်းနည်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေခံစားကြပါစို့လား။ “သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာပျောက်လျှက်ရှိကြ၏” ဟူသော ဒဏ်ချက်မျှတူခံစား ကြစို့။ မိတ်ဆွေ၊ သင်က ယေရှုကို ရိုက်နှက်သူ၊ အနာတရဖြစစေသောသူဖြစ်တယ်၊ ထို့ ကြောင့် “သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနာ ပျောက်လျှက်ရှိပြီ” ဟူ၍ ပြောကြစို့။ ခရစ်တော်ပြင်းထန်စွာ ခံရသောဒဏ်ရာတော်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြစို့၊ ထို ဒဏ်ချက်တော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနာပျောက်လျှက် ရှိသည်ကိုလည်း သိကြပါစို့။ ထိုကြီး မားသော ယဇ်ကောင်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့လက်တင်ကြစို့။ ကျွန်ုပ်တို့နေရာ၌ ခရစ်တော်အသေ ခံသွားပြီဖြစ်ကြောင်း လက်ခံကြပါစို့။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဒဏ်ချက်တော်ပြင်း ထန်စွာခံရပြီဖြစ်သည်၊ “သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အနာပျောက်လျှက်ရှိ၏” ဟူ၍ ပြောစရာမလိုတော့ပါ။ ကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ထပ်ပြောနေစရာမလိုတော့ပေ။ အပြစ်သည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်စပ်၍ မဟုတ်ပေ။ (ငဘငိ ဏ.၁၄). “သူခံရသောဒဏ် ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အနာပျောက်လျှက်ရှိ၏” ဤအရာသည်ကား၊ ခဏတဖြုတ်အတွက် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကျန်းမာခြင်းပေးပြီး၊ ဖြစ်၍ သင့်ဝိညာဉ်သည်လည်း ကျန်းမာရွှင်လန်း လျှက်၊ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ သန့်ရှင်းသူတစ်ဦးဖြစ်နေပြီဖြစ်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိ သန့်ရှင်းသူတို့နှင့်အတူ “သူခံရသော ဒဏ်ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနာပျောက်လျှက်ရှိ၏” ဟူ၍ အသွေးတော်တန်ခိုးအား သင်ဟစ်ကြွေးရပြီဖြစ်သည်! နာရီတိုင်းသန့်ရှင်းသော နာမတော်ကို ချီးမွမ်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိသတ္တဝါအပေါင်း အာမင်! အာမင်ဟူ၍ ဟစ်ကြွေးကြစို့ (ibid., p. 21).
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်၊ နာကျင်စွာထိုးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း ကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်း သည် သူအပေါ်သို့ရောက်၍ သူခံရသော ဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့် ငါတို့သည် အနာ ပျောက်လျှက် ရှိကြ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
ထိုအကြောင်းအရာကို သိရုံမျှဖြင့် သင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပေ! ဤဒဏ်ချက်တော်များ ခရစ်တော် အမှန်တကယ်ခံစားခဲ့သည်ကို သင်မျှဝေခံစားခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်ကယ်တင်ခြင်းမရပေ! ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က သင့်နှလုံးသားကို ထိတွေ့ပါစေ။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က သင့်နှလုံးသားကို ထိတွေ့နိုင်ပါစေ၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က သင့်အားခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်ပေးပါစေသော်။
“ထိုသူသည် ငါတို့လွန်မကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလေ၏။ ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဆုံးမခြင်းသည် သူ့အပေါ် သို့ရောက်၍ သူခံရသောဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့် ငါတို့သည်အနာပျောက်လျှက် ရှိကြ၏” (ဟေရှာယ ၅၃း၅)။
ထိုနုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သင့်အားခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ကျန်းမာခြင်းရှိပါစေ။ “သူခံရ သောဒဏ်ချက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် အစဉ်ထာ၀ရကျမ်းမာလျှက်ရှိပြီ” ဟူ၍ ပြောနိုင်ပါစေ၊ အာမင်!
- ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် သင်းအုပ်ဆရာမှ ဟေရှာယ ၅၂း၁၃-၅၃း၅ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
(၁၈၂၅-၁၉၀၉ ခုနှစ် အာဗက်မစ်လင် သီကုံးသော “အမျက်တော်ဖလားကျူး”)။
၁။ မထမ၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့် နာကျင်စွာထိုးခြင်း
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၅)၊ (ဇာခရိ ၁၂း၁၀)၊ (လုကာ ၂၂း၄၄)၊ (၁ပေ ၂း၂၄)
(ဟေရှယ ၅၃း၅)၊ (ရောမ ၃း၂၄း၂၅)၊
(ဟေရှာယ ၅၃း၅)၊ (မဿဲ ၂၇း၂၆)၊ (မဿဲ ၂ဝး၁၈-၁၉)